Former Zimbabwean President Robert Mugabe holds a press briefing at his residence in Harare. Picture: Tsvangirayi Mukwazhi/AP
By MacDonald Dzirutwe Jul 29, 2018
Harare - Former President Robert Mugabe said he would vote for Zimbabwe's opposition in Monday's election, turning on one-time allies in the government ahead of the first vote since they ousted him in a de facto coup.
Former Zimbabwean President Robert Mugabe, left, and his wife Grace pose for a photo after a press conference at their residence in Harare. Picture: Tsvangirayi Mukwazhi/AP
Former Zimbabwean President Robert Mugabe holds a press briefing at his residence in Harare on the eve of the country's all-important elections. Picture: Tsvangirayi Mukwazhi/AP
Robert Mugabe checks his watch during a press briefing at his residence in Harare. Picture: Tsvangirayi Mukwazhi/AP